‘ब्लाइन्ड डेट’ को निर्माण टिमले दर्शकलाई यसरी उ’ल्लु बनायो ! - jagritikhabar.com
‘ब्लाइन्ड डेट’ को निर्माण टिमले दर्शकलाई यसरी उ’ल्लु बनायो !
अपरिचित युवा/युवतीलाई कार्यक्रममा ल्याएर केही समय सँगै बस्ने अवसर दिएर पछि जीवनसाथी छान्ने अवसर दिने रियालिटी शो नयाँ हैन। भारत, अमेरिका, बेलायत लगायतका देशमा पहिल्यै चर्चित भएको रियालिटी शो हो।
यस्ता कार्यक्रम रियालिटी शो भनिए पनि पूर्व नियोजित समेत हुने गरेका छन्। कार्यक्रमको फर्म्याट अपरिचित २ जनालाई सँगै बस्ने अवसर दिएर एक-अर्कालाई बुझ्ने मौका दिने र मन मिले जीवन साथी चुन्ने नै हो।नेपालमा अन्य रियालिटी शो भित्रिए पनि टेलिभिजन च्यानलहरूले डेटिङ रियालिटीको फ्रेन्चाइच ल्याउने आँट गरेनन्।
यही बेला एक युट्युब च्यानल सञ्चालकले यही फर्म्याटको कार्यक्रम ल्याएर चर्चित बनाए ब्लाइन्ड डेटको नाममा। यसका विजेता बने शिलु पोखरेल अनि मिस्टर केके अर्थात् किरण खाती। किरण अहिले गोल्डि बनिसके। स्ट्रग्लर आर्टिस्ट ज्वेलरी बिजनेस म्यान बने।ब्लाइन्ड डेटमा आउनु अघि शिलु र किरण किरण र शिलुले त विवाह समेत गरिसके। यही कार्यक्रममार्फत बिहे गरेको भनेर ब्लाइन्ड डेट प्रसारण हुने युट्युब च्यानलमा ट्रेलर समेत राखेका छन्।